March 27, 2021 684
छोराको चाहाना राखेकै कारण गर्भपतनको क्रम पनि बढेको छ ।तर, यस्ता केही सोच र भनाईहरु छन् जसको प्रयोगले छोराको रहर पुरा हुन्छ । एक अध्ययनको नतिजा अनुसार तपाईंलाई हामी भन्दैछौं केरा खाए छोरा जन्मने सम्भावना हुन्छ । तपाईं पत्याउनुहुन्छ?
Prevदाँतमा किरा लाग्ने समस्या छ ? दाँतको किरा मार्ने अचुक घरेलु उपाय
फलफूल खाने सबभन्दा सही समय कतिबेला ? जान्नुहाेस्
“शालिग्राम नेपालमा, संरक्षण गरिँदै : ॐ लेखेर ,सेयर गर्नुहोस”